ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက် ထိန်းချုပ်ခြင်း | FLEGT
ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အတည်မပြုထားသောထုတ်ကုန်များနှင့် တရားမဝင်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောထုတ်ကုန်များ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်အတွင်း ဝင်မလာစေရေး သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံများနှင့်ကုမ္ပဏီများကို သစ်နှင့်သစ်ထွက်ထုတ်ကုန်များအား သစ်တော သို့မဟုတ် တင်ပို့မည့်နေရာမှတင်သွင်းမည့်နေရာအထိ ခြေရာခံရန်ထောက်ကူပါသည်။ ခြေရာခံစစ်ဆေးခြင်းက အလုပ်များသည် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်း ဆက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး အာဏာပိုင်များမှ တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်းကို စစ်ဆေးရန်ခြေ ရာခံနိုင်သည် ဟုဆိုလိုပါသည်။
ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် ကွင်းဆက်တစ်ခုစီရှိချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီတွင် သစ်နှင့် သစ်ထွက် ပစ္စည်း ရင်းမြစ်ကိုအတည်ပြုပေးသည့် နည်းလမ်းများနှင့်လုပ် ထုံးလုပ်နည်း အတွဲတစ်ခုလုံး ပါဝင်သည်။ သစ်လုံးနှင့် အချောထည်သစ်များကို ၎င်းတို့၏ရင်းမြစ်အား ဖော်ထုတ် အတည်ပြုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ သယ်ယူပို့ဆောင်ကြရသည်။
စာရွက်စာတမ်းများက အချက်အလက်များကို အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်၏ တစ်နေရာတွင်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်၏အရည်အတွက်နှင့်အမျိုးအစားများကို ကွင်းဆက်၏ကနဦးအပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်းလမ်းကြောင်းများတွင် ရှေ့နောက်ကိုက်ညီမှုရှိစေမည့် စစ်ဆေးနိုင်ရန်ထောက်ကူသည့်နည်းလမ်း တစ်ခု ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက် ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် မသိသော သို့မဟုတ် တရားမဝင် သော ရင်းမြစ်မှပစ္စည်းများကို တရားဝင်စစ်ဆေးအတည်ပြုထားသောသစ်များနှင့် အတူရောနှောခြင်းကို တားဆီးရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလည်းလိုအပ်ပါသည်။
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်၏ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်မှုရှုထောင့်သည် ခိုင်မာပြီး ယုံကြည်ရသကဲ့သို့ ရှိရင်းစွဲစနစ်များနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာအမြစ်တွယ် နေရမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်မှုသည် နည်းပညာမြင့်ဖြစ်ရမည် ဟုသွယ်ဝိုက် ညွန်းဆိုနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်း ဆက်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် ရှင်းလင်းပြီး စစ်ဆေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ကာ အဆုံး မသတ်မီ စစ်ဆေးသင့်သည်။
တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ်သည် မိတ်ဖက်နိုင်ငံမှ သစ်ထောက်ပံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအပြင် အခြားသစ်အမျိုးအစားများကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။
တင်သွင်းသော သစ်များ။ အချို့သော ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) ရယူထားသည့် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများသည် အခြားနိုင်ငံများမှ သစ်တင်သွင်းကြပြီး အချောထည် လုပ်ကိုင်ကာ ပြန်လည်တင်ပို့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်သည် တင်သွင်းလိုက်သောသစ်၏ တရားဝင်မှုကို စစ်ဆေးနိုင်ကြရမည်။ စနစ်သည် တရားမဝင်ထုတ်လုပ်ထားသော သစ်များကို နိုင်ငံသို့တင်သွင်းပြီး FLEGT လိုင်စင်ရယူခြင်းမှ ကာကွယ် နိုင်ရမည်။ အကယ်၍ တင်သွင်းသော သစ်သည် တခြား VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံများမှ ဖြစ်ပါက လုပ်ငန်းစဉ် သည် အခြားကိစ္စရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ ရှင်းလင်းတိကျပြီး တိုက်ရိုက်ကျသည်။ တင်သွင်း လိုက်သောသစ်သည် VPA အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သေးသည့် နိုင်ငံမှ ဖြစ်ပါက VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံအနေဖြင့် အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
တင်သွင်းလာသည့်သစ်အား စစ်ဆေးမည့် စနစ်တစ်ခုကို ထူထောင်ရန်
တင်ပို့ကုန်၏ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်အတွင်းမ၀င်လာစေရန် သစ်အား ၎င်း၏ မူလသစ်လုံးမှ ခွဲခြားထားရန်
ကူးပြောင်းသစ်။ ကူးပြောင်းသစ်တွင် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံပြင်ပမှအစပြုခဲ့သည့် မည်သည့် သစ်ထုတ်ကုန် ကိုမဆို VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်ထိန်းချုပ်မှုဖြင့် နိုင်ငံအတွင်းတင်သွင်းလာပြီး တူညီသော ပုံစံဖြင့် ပြန်ပို့လိုက်သော သစ်များပါဝင်သည်။ ကူးပြောင်းသစ်၏ဇာတိကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ တရားဝင် ဖြစ်ကြောင်း အာမခံသည့်စနစ်၏ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်ထိန်းချုပ်မှုသည် ကူးပြောင်းသစ်များ အား VPA နိုင်ငံ၏ ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေး ကွင်းဆက် အတွင်းဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့် VPA မိတ်ဖက်နိုင်ငံ ထံမှ FLEGT လိုင်စင်ရယူခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ၎င်းသစ်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ ၎င်းအစား ကူးပြောင်းသစ်ကို ၎င်း၏ မူရင်းထုတ်လုပ် သည့်နိုင်ငံအထောက်အထားဖြင့် အမြဲတွဲထားရမည်။
ဥပမာ အင်ဒိုနီးရှားတွင်အစိုးရပြန်တမ်းဖြစ်သည့် Principal Customs Areas သည် ကူးပြောင်းသစ် နှင့်သစ်ထွက်ပစ္စည်းများကို တင်းကျပ်စွာဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် တဆင့်ပို့သစ်များသည် အကောက်ခွန် ကောက်သည့် ဧရိယာသို့မဝင်လာတော့ဘဲ FLEGT လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် သစ်ကုန်စည် ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက် တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။
ဥပမာ။ ။ လိုင်ဘေးရီးယားရှိ သစ်နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးသည့်စနစ်များ
လိုင်ဘေးရီးယား၏ပိုင်ဆိုင်မှုကွင်းဆက်စနစ်ဖြစ်သည့် LiberFor သည် ခုတ်လှဲနိုင်သည့်သစ်ပင်တိုင်းနှင့် ပိုင်းဖြတ်လိုက်သည့်သစ်တိုင်းအတွက် သစ်တောမှဆိပ်ကမ်းအထိ ခရီးတလျှောက်လုံးတွင် ဘားကုဒ် သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်သည်အာဏာပိုင်များကို ခုတ်လှဲလိုက်သောသစ်ပင်၏ငုတ်ရင်း အထိ သစ်ကိုခြေရာခံရန် ခွင့်ပြုပါသည်။ စနစ်သည် သစ်ခုတ်သမား၏ သစ်ခုတ်လှဲခွင့်ကိုလည်း အတည်ပြုပေးပြီး အခွန်အခများကို ပေးချေစေသည် LiberFor သည် သစ်လုပ်ကွက်များရှိ သစ်စာရင်း နှင့်မြေပုံများခုတ်လှဲလိုက်သောသစ်ပင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက် နှင့် ပင်ထောင်များ ၏ ထုထည်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးပါသည်။ စနစ်သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစာရွက် စာတမ်းများ နှင့် တင်ပို့ခွင့်ပါမစ်စသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။ လိုင်ဘေးရီးယား၏ Legality Verification Department သည် လူမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းကဲ့သို့သော တရားဝင်မှု၏အခြားရှုထောင့် များကိုစစ်ဆေး အတည် ပြုရန် LiberFor အပေါ်တွင် တည်ဆောက်လိမ့် မည်ဖြစ်သည်။
ဇစ်မြစ် : Carey, R. and Schrader, S. 2012. The LiberFor tracking system: state of implementation. PowerPoint presentation. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
EU. 2007. FLEGT Briefing Note 04: Control of the supply chain: Wood tracing systems and chain of custody. European Union. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]